Waxaan Ahay Cadaan, Muxaafid Ah Oo Kiristaan Ah, Waa In Aad Ii Jilbo Joogsataa Oo Aad Faraantigayga Dhunkataa-Shirkada Twitterka Oo Ciyaartoy Premier League Ah U Hiilisay. - Gool24.Net
Waxaan Ahay Cadaan, Muxaafid Ah Oo Kiristaan Ah, Waa In Aad Ii Jilbo Joogsataa Oo Aad Faraantigayga Dhunkataa-Shirkada Twitterka Oo Ciyaartoy Premier League Ah U Hiilisay.
June 19, 2020 Mahamoud Batalaale
Gabadha Ingiriiska ah ee Katie Hopkins oo ku kacday cunsurinimadii ugu waynayd isla markaana muujisatay cadaawada dadka madow ayaa la mariyay mid ka mid ah ciqaabihii ay dad waynuhu doonayeen.
Katie Hopkins oo caan ka ah dalka UK isla markaana wax ku qorta wargaysyada waa wayn ayaa cunsurinimo wayn kula kacday xidiga kooxda Crystal Palace ee Patrick van Aanholt waxayna u adeegsaday kalmado isku xidhan oo kiciyay dareenka dad waynaha.
Hopkin ayaa Patrick van Aanholt u sheegtay in ay iyadu tahay qof cadaan ah, muxaafid ah isla markaana Kiristaan ah sidaa daraadeed ay isaga oo madow ah waajib ku tahay in uu iyada u jilbo joogsado si uu faraantigeeda u dhunkado.
Laakiin markii uu qoraalkaasi soo gaadhay dad waynaha waxay bilaabeen olole ama petition kaas oo ay in ka badan 75,000 kun oo qof ka codeeyeen Change.Org waxaana shirkada Twitterka loogu baaqay in gabi ahaanba la kansalo akownka ay bartan ku lahayd Katie Hopkins.
Ugu danbayn shirkada Twitterka ayaa war rasmi ah ka soo saartay dalabkii dad waynaha waxayna si rasmi ah u shaaciyeen in Akownkii twitterka ee Katie Hopkins ay gabi ahaanba si rasmi ah u tirtireen oo meesha laga saaray.
Markii uu warkani soo baxay waxaa falcelin ka sameeyay xidigii kooxda Crystal Palace ee Patrick van Aanholt kaas oo ay fariino badan iska soo dhaafsadeen intii aan akownka Katie Hopkins la xidhin.
Qoraaladii ay Katie Hopkins ay colaadan ku bilawday waxa uu ahaa: “Maanta waa arbacadii ay soo bixi lahaayeen cadaanku. Waqti dhow waxaan soo dhigi doonaa sawirka dabadayda-waad mahadsan tihiin”.
Waxayna qoraalkan uga soo hor jeeday fariinta “Nolosha dadka madow qiimo ayay leedahay” ee magacyadii ciyaartoyda Premier League lagu badalay waxaana ka soo jawaabay xidiga kooxda Crsytal Palace ee Van Aanholt.
Van Aanholt ayaa soo qoray: “Anigu ma garanayo cida ay tahay laakiin WOW. Waxa uu 2020 u baahan yahay in uu ku kansal gareeyo adiga. Iyadu waxay xaqiiqdii jeceshahay in ay hadasho, intee in leeg ayay micno la’aantan ku sii jiri doontaa?”.
Katie Hopkins ayaa intaas kadib isku dayday in ay isbarto xidiga Crystal Palace ee Van Aanholt waxayna u soo qortay fariinta galaafatay akownkeedii twitterka waxayna tidhi: “Patrick van Aanholt qaaliga ahow, magacayga waxaa la yidhaa Katie Hopkins. Anigu waxaan ahay muxaafid, cadaan ah oo kiristaan ah. Waa in aad jilbo joogsato oo aad dhunkarto faraantigayga”.
Patrick van Aanholt ayaa markiisa soo jawaabay wuxuuna u soo qoray: ” Katie Hopins ta qaaliga aheey, magacaygu waa Patrick van Aanholt, waxaan ahay nin madow oo Ducht ah, sidoo kale waxaan ahay Kiristaan, midabka iyo diintu waxba kuma laha. Faraantigaaga miyaa, waa lagugu soo dhawaynayaa Selhurst waxaanad dhunkan kartaa suulkayga wayn, waan sugi doonaa”.
Kadib Patrick van Aanholt waxa uu twitterka ku soo qoray: ” Twitter waan seexanayaa, laakiin waxaan balan idiinku qaadayaa in aan waqti u samayn doono Katie Hopkins”.
Waxayna balantii noqotay in Patrick van Aanholt uu bilaabay ololaha gabadhan looga mamnuucayay in ay dib u isticmaali karto akownkii ay nacaybka iyo cunsurinimada ka faafinaysay.
Kadib markii saacadihii la soo dhaafay uu twitterku gabi ahaanba kansalay akownkii barta twitterka ay ku lahayd Hopkins waxaa hadlay afhayeen shirkada twitterka oo dhacdadan dareen ka bxiiyay.
Afhayeenka shirkada twitterka ayaa yidhi: “Ku sii haynta nadgalyada twitterku waa muhiimayada ugu saraysa, dhaqamada nacaybka iyo si xun u isticmaalku meel kuma laha adeegayaga, waxaananu sii wadi doonaa in aanu talaabo ka qaadno marka sharcigayaga la jabiyo”.
“Xaaladan (kansal garaynta accountkii Hopkins), waxaanu si rasmi ah u ganaaxnay accountkan in uu meel kaga dhacay siyaasadayada dhaqanka nacaybka ah”.